Ihe a na - akpọsa n’ihe ndị a na - akpọsa n’ebe a na - akụkụ ụgbọ mmiri na - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ebe ebe usoroiheomume>Ịgba Ụlọ Ọkụ
A na - eji ebe nile eme ihe ndị a na - eme ihe n’ebe a na - akpọ ụgbọ mmiri. Ọ na - ejikọkọta nchebe ịnọ nanị onwe ya na ọrụ ọtụtụ ndị dị ka ìhè, ịnyịpụ ahịhịa ọkụ, ịnọpụpụ iche, n’ebe anyanwụ. Nke kasị mkpa, ọ na - echebe ụlọ ndị ahụ pụọ n’agbanyeghị na ihu igwe.
A na - akpọ a na - enwe ihe ndị a na - akpọ akụkụ na ike dị elu ruo n'ụdị ibu, nke na - eme ka ọ dị mfe ịrụ ụlọ ndị ọhụrụ na ịrụzi ụlọ ochie.
Mgbe a na - agwọ ọrịa n’elu, oyiyi ọhụrụ nke oge a ga - eme ka ụlọ ahụ dị iche iche nakwa na ọ dịghị ihe oyiyi.
Ihe a Na - akọ n’Aluminiu
Ịgba Ụzọ n’Ụzọ
Ihe kacha mkpa bụ ihe ndị kacha mkpa.Nhọrọ Ihe Ihe Onwunwe
A ghaghị ịkpuchi ígwè a na - akpọ n’èzí, ọ dịkwa mkpa nnukwu obodo, n’ihi ya, a na - enwe ume nke ihe onwunwe na iguzogide mmiri dị mkpa. Nkwa n'ụtụtụ ume-ruo na-iburu na-tụlee ihe isi ike n'owuzuwu na ịkpọgide nke nzukọ nzukọ n'ihere.
Aluminium bụ ihe kacha mee ihe.
Mmadụ a na - eguzogide ọkụ n’ahụ́.
M na - ebu dị elu.
Ọ dị mma otú ahụ mgbe a na - agaghị adị mfe.
A na - eji akụkụ akụkụ n'ebe dị njọ n'ógbè ihu igwe, n'ihi na o nwere mmetụta kasị mma na-agbata ọnọdụ.
Ụzọ Ụlọ Nzukọ Ndị Na - akọ n’Ụzọ
Nhọrọ Nke Ụzọ
Ụfọdụ n’ime ihe ndị a na - eme n’ahụ́ n’ụgbọ mmiri na ọlaọcha.
Ụdị ụlọ ndị a na - egbu n’ahụ́ na - anọchi anya uru a na - achọ mma nke ụlọ ndị ahụ.
N’ihi ụdị ogologo oge, usoro ndị a na - ahazigharị anya, dị ka gburugburu na oké ahụ́ na - ewu na - ewu ewu na - egbukepụ.
Iji mmetụta siri ike nke ahụ, a na - enwe ọdịdị na ụdị ọnụ a na - enwe.
Ebe ndị dị mma n’ebe ndị ga - eme ka a na - enwe mmasị ụgbọelu. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na - emepụta ahọrọ ebe ọhụrụ 35% gaa n’aka ihe ndị a na - eme n’elu ihe ndị ahụ, dị ka ìhè, ifufe, ịnwapụ anyanwụ na nchebe ọnọdụ n’onwe ya.
Ịgwọ ọgwụgwọ dị n’elu ụkwụ na - agụnye a na - arịa ọkụ n’ahụ́.
Ụlọ a na - enye ọtụtụ nhọrọ ákwà iji kpuchie ígwè mbụ nke mbụ, bụ́ nke pụrụ inye aka inye aka n’agbanyeghị nzube na ịkpọ nzube.
I Anodizing pụrụ ịnọgide na - enwe mmasị n’oge a na - akwụ ígwè ahụ. Ọ na - emekarị n’ebe a na - akpọ aluminum, bụ́ ndị pụrụ ichebe pane ndị ahụ pụọ n’agbanyeghị oké ọkụ na ọkụ.
Ụlọ ụlọ a na - akọ n’ahụ́ a na - akọ n’ahụ́
E wezụga ihe ndị e kwuru n’elu, ndị na - edepụta ya ga - elekwa anya otú e si nweta ihe ndị a na - eme n’ihe ndị a na - akọ. Anyị pụrụ inye aka nanị ịrụnye paneel ndị ahụ dị ka ịkpa ma ọ bụ na - agbapụ.
A na - eji ihe ndị a na - eme n’ebe dị iche iche n’ebe ndị dịgasị iche iche, dị ka ebe a na - egosi, ígwè ụgbọ okporo ígwè, ụlọ ahịa ahịa, ụlọ ọgwụ, ụlọ ụlọ nr.
Ọzọrụ:Ụzọ n’Ụlọ Ọkụ
Mwagụ̀ facades architecture, architectural cladding, perforated metal cladding, perforated mesh screen,
Gịnị bụ Ịgba Ụlọ Akwụkwọ Nzukọ?
Gịnị bụ Ịgba Ụlọ Akwụkwọ Nzukọ?AkwụkwọỤzọỌ bụ ihe e ji eme ihe n’ebe a na - eme n’ebe ụlọ maka ma nchebe ma n’ihe ndị a na - enye aka. Ụdị ihe dị iche iche a na - eme n’ihe ndị dị iche iche dị iche ic...
Injinyere GWS na egwú
Ịgba Ụlọ ỌkụTaa dị ka ìhè a na - achọ ego, ihe a na - egosi n’ihe ndị a na - eme n’ihe ndị a na - emepụta n’ihe ndị a na - emepụta n’ụlọ ọrụ. Dị ka iji ihe a na - eme n’ime ihe ndị a na - akpọ n’ahụ́ ...
Inyogo inyogo mesh pọpaa
Inyogo inyogo mesh pọpaa Ụlọ ahụ n'ihi ebe abụọ e jikọtara; igbe a kpupupụta ogologo oge nke na - agbanye n'igbe a na - emepụta, na owuzi oké ngwa ngwa. Ụbọchị ahụ na - agbanwe ma gbag...
Gịnị bụ otú e si eme ihe ndị a?
Gịnị bụ ihe aỤzọ rụọ ahụ?
Ihe a na - emepụta n’ihe e dere n’akwụkwọ
Ihe a na - emepụta n’ihe e dere n’akwụkwọDị ka ihe e wuru ígwè,Inyogo inyogo mesh pọfịaA mụrụ ya na ụma avant-garde. A na - eji ya eme ihe nile n’ebe nile n’ihe owuwu, ihe a na - eme ihe n’ime n’ime i...
Ụkpụrụ owuwu nke a na - eji ihe e ji eme ihe n’agbụ
Ụkpụrụ ỤzọNke ụlọ ntịN’ihe dị ka afọ 200 gara aga, ndị mmadụ pụrụ iche na ugwu, ọdọ mmiri, na ọzara na - adịgide adịgide n’ụwa. Otú ọ dị, anyị maara ugbu a na a ga - eme ka ugwu dị iche iche ma kwụsị ...
Ihe a na - akpọ ígwè a na - anọ n’ahụ́
Ụdị ígwè a na - anọ n’ahụ́AịnyụE bu ụzọ e ji usoro a na - eme ihe mkpụrụ mma, dị ka ọlaedo na ọlaọcha na ọlaọcha dị njọ ma na - agbachi ya n’ahụ́ ọlaedo ma ọ bụ ọla ọlaọcha, na iji mechaa ngwa ngwa ng...
Ụzọ a na - eme ihe e ji eme ihe n’ahụ́
Ihe e ji eme ihe n’ahụ́N’ikpeazụ ghọọ onye nnwere onwe dị oké mkpa n’ihe nkà e ji eme ihe. Ọ bụrụ na ị na - echeta ihe ndị ọzọ n’oge gara aga, ọ dịkwa otu ihe ndị ọzọ. Ọ na - agbanwe n’usoro nke nkụzi...